04.01.2020 30.07.2021 admin Personal Growth
Siyaasadda portal. Its version dib-u-soo daabacay ka kooban Hordhaca ah Arar iyo shan cutubyada ugu weyn Qaybo kuwaasoo mid walba uu yahay sub-qaybsan Qaybo Xubno. Hadda waxaa jira guud ahaan Articles Qodobo marka loo eego hore Articles.
Somaliland ayaa dukumentiyada kale ee dastuuriga ah ee muhiimadda taariikhiga ah oo ka heshiisyada caalamiga ah ee ay beelaha Somaliland kala duwan saxiixday dawladda Britain u dhaxayn, iyo diyaarinta dastuurka kala duwan ka hor xornimada in Declaration of Dib-u-caddaynta of Xukunka ee Burco oo ka mid ah shirarka horeyn grand oo ka mid ah beelaha Somaliland.
Inkastoo Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ahaa madax-bannaan muddo gaaban ee June , waxaa ka dib midaysan la Talyaani Somaliland si ay u sameeyaan Soomaaliya. Inta lagu jiro muddada gaaban in dastuurka dhamaystiran ma la ansixiyay. The State of Somaliland lahaa gaar Dastuurka waxaa la qoray horraantii kii, oo ahaa kooban meel. Taasi waxaa xigay dastuurka Somaliland ugu horeeyay, taas oo la ansixiyay ee shirka ee Beelaha Somaliland ee Hargeysa ee February Under article , dastuurka la fulin doona muddo saddex sannadood ka ansixiyo in February iyo dhaqan gelin doonaa si buuxda mar afti ayaa lagu qabtay.
Inkasta oo markii hore ay dawladda Somaliland la soo jeediyay si cadaalad ah beddelka ballaaran in dastuurka sanadkii , dastuurka kama dambaysta ah dib loogu ma aha mid ka duwan mid ka mid ah la soo dhaafay iyo hoos u of tirada articles ka si ay u ayaa inta gaari by isku darka ah ee articles qaar ka mid ah, halkii by nasakhayaa ballaaran.
Si ka duwan soo jeedinta hore qabyada ah, ee qeybo ka mid ah dastuurka la xidhiidha mabaadi'da dardaaran iyo xuquuqda aadanaha ayaa lagu soo ceshan. On oo dhan, dib kor u hagaajinayaa dastuurka oo aan isbeddel asaasi ah ayaa la sameeyey. Template:Africa in topic. Sharci dajinta. Garsoorka ee Somaliland. Madaxweynaha: Baarlamaanka, Xiriirka Dibadda. Qaybaha kale. Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor.
Dalalka kale Adlas Siyaasadda portal. Qeybaha : Dawladda Somaliland Dastuurka. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Muuqaalka Akhri Fiiri xogta Fiiri taariikhda. Qalabka Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la'xiriira Soo geli fayl Bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Boggaan soo xigo shay. Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Agoosto , marka ee eheed Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale.
Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Qodobadaan waa kuwa ka mid ah Tixda: Siyaasadda iyo Xukunka Somaliland. Dastuurka Dastuurka. Garsoorka Garsoorka ee Somaliland. Doorashooyin Madaxweynaha: Baarlamaanka, Xisbiyada siyaasadeed Siyaasiyiinta. Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor.